Ngathi-Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
Ukusukela ngo-2008, besisebenza kakhulu kubuchwephesha bobuchwephesha kunye nobuphambili kwii-salon, ii-spas, iiklinikhi kunye nokwenza.
Ukujolisa kwethu ekujongeni ekunikezeleni abathengi ngonyango lwangaphambili lokucinga lonyango oludibeneyo kunye nenqanaba lenkonzo elingenakuthelekiswa nanto kunye nenkxaso eqhubekayo yeshishini ibone iqela lethu liguquka ngokukhawuleza ukuba libe ziinkokeli zeshishini-kuseta umlinganiso wento enokwenzeka kwicandelo eliqaqambileyo lobugcisa. Okwangoku, sibonelela ngetekhnoloji yonyango olunqamlezileyo kunye nenkxaso yokukhula kweshishini kwizitokhwe ezingaphaya kwama-2 000 e-China.
Sinyanzelisa ukuqala kwiimfuno zabathengi, qhubeka nokubonelela ngeenkonzo zokukhetha imveliso, ukuthengisa iimveliso eziphambili zeshishini, kunye nokwenza ixabiso eliphezulu kubathengi. Ukwaneliseka kwabaxhasi ngumgaqo wenkonzo yethu.
Iqela lethu lineengcali zobuchwephesha ezingaphezulu kwe-30 kubandakanya iinjineli ezifanelekileyo, abathengisi, abacebisi ngetekhnoloji, ootitshala, ukhathalelo lwabathengi, ulungiselelo, ezemali, ezolawulo, kunye nabasebenzi bezolawulo. Ngalenethiwekhi isondeleyo, sixhobisa amashishini ezobuhle bobukhulu bonke kunye nobuchule bokufikelela kumgangatho ophakamileyo kunye nakwinqanaba lezonyango kuluhlu lwezixhobo zobuhle- zonke ziphandwe ngokucokisekileyo kwaye zafunyanwa kwabona bavelisi baphambili kwihlabathi kubuchwephesha obuphambili besaluni yakho, ispa, ikliniki kunye ukuziqhelanisa.
Ewe kunjalo, iqela lethu lezorhwebo langaphandle lenziwe liqela labafundi abancinci beekholeji abathanda ishishini lobuhle. Banobuchule kwisiNgesi, iSpanish, isiJamani, isiFrentshi, nesiArabhu, kwaye banikezela ngolwazi oluchanekileyo ngexesha elifanelekileyo nangokuchanekileyo, ukwazisa ngemveliso kunye nokusebenza kubathengi kwihlabathi liphela. Isikhokelo, emva kokuthengisa ukuguqulelwa kunye neminye imisebenzi yenkxaso kwi-Intanethi.
Singababoneleli ngetekhnoloji yokuqala xa kuziwa:
>> Umatshini wokususa iinwele we-IPL
>> 808nm diode laser umatshini ukususwa iinwele
>> Cryolipolysis matshini umatshini slimming
>> Izixhobo ze-IPL Laser RF multifunction
>> CO2 izixhobo laser ubuhle
>> Ukuvuselelwa kolusu kwe-PDT ye-LED
>> IPL YAG laser Yiba nenceba inxalenye
>> Nd: Yag Laser Umatshini wokuSusa uMvambo
>> Ekhaya Sebenzisa Mini Ubuhle Machine
>> Ukuphakamisa ubuso koomatshini bokuhlaziya ulusu
>> Amazinyo enza mhlophe
>> Ukuvuselelwa kweenwele zeLaser
senza abantu bahle .mangalisa .comforable.
"I-Zohonice Beauty Equipment Co.LTD" iya kuthathelwa ingqalelo yi-salon, i-spa, iklinikhi kunye nabanini bePratic njengabakhokelayo kwifashoni kwi-Beautiful efayilini kunye nokudala isitayile se-highlife esimangalisayo ..
Izibonelelo ezinokuthenjwa ezinokukwazi ukuNqwenela, ukuYila, ukuHlonipha, ukuXhasa ukuRhweba, ukuNwaba.